Madaxweyne Farmaajo waxa uu dhabbo cusub u jeexay siyaasadda Soomaaliya – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxweyne Farmaajo waxa uu dhabbo cusub u jeexay siyaasadda Soomaaliya
Allhadaaftimo August 1, 2019 August 1, 2019 Uncategorized
Muqdisho (SONNA):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u celiyay jinsiyaddii dalka Maraykanka.
Go’aanka Madaxweyne Farmaajo uu ku celiyay jinsiyaddiisa labaad waa mid shakhsi ah oo uu si iskiis ah u gaaray sida lagu xusay warsaxaafadeedka laga sii daayay Madaxtooyada qaranka. Waxa xusid mudan in Dastuurka Kumeelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu oggol yahay in Madaxweynuhu haysto jinsiyad kale.
Sidaas oo ay tahayna, Madaxweyne Farmaajo waxa uu go’aanka celinta jinsiyadda qaatay isaga oo ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya balse aan ahayn qof muwaaddin ah oo caadi ah.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu gudagalay hawsha celinta jinsiyadda Maraykanka ka dib markii loo doortay xilka Madaxweynennimo ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hannaanka celinta jinsiyadda Maraykanka oo wakhti qaadatay awgeed, waxa suurtagashay inuu Madaxweynuhu celiyo jinsiyaddaas maanta oo ay taariikhdu tahay 1-da August, 2019.
Madaxeyne Farmaajo waxa uu dhabbo cusub u jeexay siyaasadda Soomaaliya maadaama oo uu noqday Madaxweynihii ugu horreeyay ee si iskiis ah uga tanaasula jinsiyad kale iyada oo aanay jirin duruuf ama sharci ku riixaya inuu sameeyo sidaas.
Tallaabada geesinnimada leh ee uu qaaday Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay yiddidiilo cusub gelisay shacabka Soomaaliyeed oo muddo hadal hayey arrintan, waxayna tusaale u noqonaysaa dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee haysta jinsiyadaha kale.
Sidoo kale, go’aankan taariikhiga ahi waxa uu keenayaa in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaanna siyaasiyiintu ay si buuxda ugu kalsoonaadaan dalkooda iyo baasaboorkooda iyaga oo ka tanaasulaya jinsiyadaha kale ee ay haystaan.
Previous Inaali Allah wa inaa illeyhi raajicuun Illaahow ha u naxariisto Gudoomiye Inj. Yariisow
Next Shir dhaqameed muddo bil ah kasoconayey Magaalada Damalla xagarre ee koonfurta gobolka Sanaag ayaa!!